Mogadishu Journal » 2018 » March » 28
Mjournal :-Gaari waxyaalaha qarxa lagu soo xirey ayaa goordhow ku qarxay meel ku dhow isgoyska Zobe ee magaalada Muqdisho iyadoo qaraxaasina ay ka soo baxayaan warar kala duwan. Qaraxan ayaa wararka qaar ay sheegayaan inuu ka dhashay gaari lagu soo xirey waxyaalaha qarxa kaasoo...
Shaqaalihii xafiiska laga maamulayay hawada Soomaaliya ee Nairobi oo maanta Muqdisho yimid
Mjournal :-Maanta Magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray shaqaalihii ka shaqeynayay hay’adda maamusha hawada Somaliya ee ICAO ee magaalada Nairobi, shaqaalahaas oo dib ugu shaqa bilaabi doono waaxda Hawada ee Soomaaliya. Maxamed Cabdulaahi Salaad oomaar Wasiirka duuliska Hawada ee...
Amar lagu soo rogay gaadiidleyda Boosaaso
Mjournal :-Taliska booliiska gobolka Bari ayaa amar kusoo rogay gaadiidka Takaasida ah ee ka dhex shaqeeya magaalada Bosaaso, kuwaas oo ah baabuurta ugu badan oo ay isticmaalaan shacabka Bosaaso. Sidoo kale taliska ayaa sheegay in ganaax lacageed ay ka qaadayaan baabuurta leh...
Maxaa sababay dib u dhaca Shirka Golaha Amniga Qaranka?
Mjournal :-Dib u dhac ayaa ku yimid Shirkii Golaha Amniga qaranka ee lagu wadday in uu maanta ka furmo Magaalada Baydhabo ee Caasimadda KMG ah ee maamulka Koonfur Galbeed. Sidoo kale Magaalada Baydhabo ayaa laga dareemeynin qabanqaabo ku aadan soo dhaweynta Madaxda iyo sidoo kale...
Muddo Kordhin loo sameeyay xafiiska Qaramada Midoobey ee Soomaaliya
Mjournal :-Golaha Ammaanka ayaa meel mariyay qaraar waqtiga loogu kordhinayo Xafiiska Qaramada Midoobey ee Soomaaliya UNSOM, kaasoo muddo xileedkiisa la gaarsiiyay 31 bisha March 2019. Fadhi Golaha Ammaanka shalay ku yeeshay magaalada New York ayaa waxaa looga hadlay howl galka...
Dowlada Soomaaliya oo ashtako ka dhan UAE u gudbisay Golaha Ammaanka
Mjournal :-Danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada Midoobay Abuukar Daahir Cismaan ayaa ashtako ka dhan wadanka Isutagga Imaaraadka Carabta u gudbiyay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay isagoo sheegay in Imaaraadka Carabta ay ku xadgudubtay qaranimada dalka Soomaaliya. Danjire...
Abiy Axmed oo loo doortay guddoomiya xisbiga talada haya dalka Ethiopia ee EPRDF
Mjournal :-Xisbiga talada haya ee dalka Ethiopia EPRDF ayaa u doortay guddoomiye Abiy Ahmed oo ka soo jeeda qowmiyada Oromada, kadib markii uu isc asiley ra’iisal wasaarihii hore ee dalkaas Hailemariam Desalegn. Abiy Axmed ayaa aabihii uu yahay nin Muslim waana 41 jir siyaasada...